သိပ္ပံပညာရှင်များ simulated ဝဠာသန်းပေါင်းများစွာတည်ဆောက်မယ့်စူပါကွန်ပျူတာဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ကြ - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သိပ္ပံ "သိပ္ပံပညာရှင်တွေက simulated ဝဠာသန်းပေါင်းများစွာတည်ဆောက်မယ့်စူပါကွန်ပျူတာဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ကြ - BGR
သိပ္ပံပညာရှင်များ simulated ဝဠာသန်းပေါင်းများစွာတည်ဆောက်မယ့်စူပါကွန်ပျူတာဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ကြ - BGR
သိပ္ပံပညာရှင်များကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်မှန်နှစ်ပေါင်းဘီလီယံကျော်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုယူထားပြီးဘယ်လိုနားလည်ရန်အဘို့အဒါဟာခက်ခဲသည်။ အဆိုပါ Big Bang အဖွဲ့နှင့်၎င်း၏ချက်ချင်းအကျိုးဆက်များရုန်းကန်နေကြတယ်, ဒါပေမယ့်သုတေသီများအရီဇိုးနားတက္ကသိုလ်ကနေအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဦးဆောင်မည်သို့သီအိုရီ သူတို့က virtual ကမ္ဘာသန်းပေါင်းများစွာတူအောင်ဖန်တီးများနှင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မြင်သောအရာကိုမှအနီးဆုံးနေသောဆုံးဖြတ်ရန်စူပါကွန်ပျူတာကိုတောင်းနဂါးငွေ့တန်း၏ဖွဲ့စည်းခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များအချို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ထုတ်ဝေအသစ်တစ်ခုသုတေသနစာတမ်းတွင် တော်ဝင် Astronomical Society ၏လစဉ်အသိပေး သူတို့ရှေ့မှာဆက်ရေးနှစ်ပေါင်းဘီလျံ (ကို virtual) ကတော့ galaxy ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုစောငျ့ရှောကျချစ်စနိုးက "စကွဝဠာ၏စက်" ကိုသုံးနိုင်သည်။
"ဟုအဆိုပါကွန်ပျူတာတွင်ကျနော်တို့အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောကမ္ဘာဖန်တီးနိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုငါတို့မြင်တဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြအုပ်စိုးသောအရာကိုကောက်ချက်ချခွင့်ပြုတည်ဆဲကြောင်းမှနှိုင်းယှဉ်," ပတေရုသ Behroozi, လေ့လာမှု၏ဦးဆောင်ရေးသားသူအတွက်ဆိုပါတယ် ကြေညာချက်။
ဤသည်ချဉ်းကပ်ချဲ့မနေတော့နဂါးငွေ့တန်းဖွဲ့စည်းခြင်း၏အမြစ်တွယ်နေပြီးသီအိုရီကိုစမ်းသပ်ဖို့သိပ္ပံပညာရှင်များ enabled သိရသည်။ Big Bang အဖွဲ့နှင့်ပြီးသားအချို့ထှနျးသတင်းအချက်အလက်ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနက်ရောင်တွင်း၏လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကတော့ galaxy အတွက်ပူဓာတ်ငွေ့ဖွဲ့စည်းခြင်း, ကြယ်များပေါက်ကွဲနှင့်မှောင်မိုက်နေပါစေ၏ဆွဲငင်အား အရှင်အသစ်သောကြယ်ဖွဲ့စည်းရေးကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့နဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုသေဒဏ်ဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါသုတေသီများအစစ်အမှန်ကမ္ဘာလေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုက်ညီတဲ့သော Simulator အတွက်ဤကိစ္စတွင်မပေးကြောင်းပြောကြသည်။
"ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးအဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောဝဠာတှငျသှားစဉျ, ငါတို့အမှောင်ထဲမှာကိစ္စကပိုသိပ်သည်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပို. ပို. ပူဖြစ်လာကြောင်းမျှော်လင့်ထားပါတယ်" ဟု Behroozi ကဆိုသည်။ "ဒါဟာကြယ်ဖွဲ့စည်းရေးအဘို့ဆိုးရဲ့, ဒီတော့ကျနော်တို့ကအစောပိုင်းဝဠာတှငျအမြားအပွားနဂါးငွေ့တန်းရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းကြယ်များရပ်တန့်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေ့ပေးထားသောအရွယ်အစား၏နဂါးငွေ့တန်းမျှော်လင့်ချက်များဆန့်ကျင်နေတဲ့မြင့်မားတဲ့နှုန်းမှာကြယ်ပွဖွဲ့စည်းရန်ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ "
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအလုပ်အာဏာပြင်းထန်သောကွန်ပျူတာလိုအပ်နှင့်ဖြစ်ပျက်များအတွက်သုတေသီများ, NASA နဲ့ကောလိပ်အတွက်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စူပါကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ်သောဂျာမန်သိပ္ပံနည်းကျအရင်းအမြစ်များ၏အကူအညီတောင်း။ စုစုပေါင်း2000 ပရိုဆက်ဆာများတွင်ပိုမို 8 သန်းကို virtual ကမ္ဘာ generate မှသုံးပတ်အတူတကွအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Image ကိုအကြွေး: နာဆာ / ESA
BGR - အဝလွန်ယခင်ကထင်ထက်ကင်ဆာပင်အန္တရာယ်ဖြစ်ပါသည်
Gamescom 2019:2MudRunner SnowRunner MudRunner တစ်ဦးကဂိမ်းဖြစ်လာ
pedophilia စွပ်စွဲနေတဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန် - ဗွီဒီယို
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်3,150